Uvavanyo kunye nabavelisi bezixhobo | Uvavanyo lwase China kunye neMveliso yezixhobo kunye nabaxhasi
Iziko leMveliso loyilo lwePCB
Iziko leMveliso yePCB
I-USB Explorer ye-USB 3.0 kunye neNkqubo yoVavanyo ye-2.0
Inkqubo yoLawulo loThutho
4 ibhodi yesekethe eguqukayo eqinileyo ehambelana neemoto
Umaleko webhodi yesekethe ye-10 ye-Ultra-rugged PDA
10 maleko HDI ubeko PCB
Indibano ye-PCB yesixhobo sokuChonga iimoto
Le projekthi yendibano ye-PCB yesixhobo sokuchonga iimoto. Umzi mveliso weemoto uneemfuno ezingqongqo kakhulu malunga nokusebenza kunye neenkqubo, umgangatho kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Zonke ezo zinto ziphambili kwaye zisentliziyweni yemithetho yokusebenza kwe-Asteelflash, kwihlabathi liphela. Njengenkampani ye-elektroniki yeemoto kunye nomenzi wePCBA oomatshini, thina, ePandawill, sihambisa iinkonzo ezikumgangatho ophezulu kubunjineli, uyilo kunye neprototyping.
Le yiprojekthi yebandla le-PCB yesixhobo sokuhlalutya imichiza. EPandawill, ukuqonda kwetekhnoloji yethu yokuvavanya kusenza iqabane elikhethekileyo kwizixhobo kunye nomlinganiso weshishini kwaye sisa izisombululo kwiinkampani eziphambili kwihlabathi
Le yiprojekthi yendibano ye-PCB ye-USB Explorer ye-USB 3.0 kunye neNkqubo yoVavanyo ye-2.0. EPandawill, ukuqonda kwetekhnoloji yethu yokuvavanya kusenza iqabane elikhethekileyo kwizixhobo kunye nomlinganiso weshishini kwaye sisa izisombululo kwiinkampani eziphambili kwihlabathi.